Ehe evasikana, iyo yakabudirira mutambo weSpanish neoclassicism | Zvazvino Zvinyorwa
Ehe vasikana Iyo inonyanya kukosha mutambo wemitambo weSpanish neoclassicism. Naizvozvo, inomiririra montage yakabudirira kwazvo pamabhodhi eIberian Peninsula yese muzana ramakore rechi24. Chikamu ichi chakatangwa muna Ndira 1806, 37.000 muMadrid. Pakazara, kuverenga kunofungidzira kuvepo kwevamwe vangangoita XNUMX mukati memavhiki manomwe asina kumiswa muLa Cruz Theatre.
Pamwe pamwe nekuita kunoshamisa pahofisi yebhokisi, zita racho rakavawo chiitiko chekugadzirisa. Zvikuru zvekuti gore risati ratangwa, angangoita maviri edhisheni anga achitotenderera. Zvakare, muna 1806 mamwe maseti akawedzera emakopi akadhindwa. zvese kuSpain nemunyika dzakaita seFrance neItari. Izvi zvakatendera makambani akati wandei kusimudzira magungano avo. Muchokwadi, zvakatoitwa pasina kuzivisa munyori.
1 Leandro Fernández de Moratín: nyanzvi
1.1 Mutambi wenhau weSpanish neoclassicism
1.1.1 Kuseka sechinhu chinoratidza
1.2 Nyore pachikuva
2 Ehe evasikana, basa rinopokana pamberi penguva yaro
2.2 Rudo rwechokwadi
3 Ehe evasikana: kukunda kwerudo uye kufunga
Leandro Fernández de Moratín: nyanzvi
Leandro Fernandez de Moratín Ndiye mumwe wevanyori vane mukurumbira veSpanish vemazana emakore apfuura uye nhamba inotaurwa mukati meCastilian Enlightenment. Akazvarwa muMadrid musi waMarch 10, 1760, mumhuri ine mbiri kubva kuAsturias. Chii chimwe, baba vake vaive mudetembi Nicolás Fernández de Moratín. Izvi zvaimiririra chikadinari chinokurudzira kupinda munyika yetsamba.
Munguva yehudiki hwake uye kuyaruka, Mamiriro ehutano hwaLeandro asina kusimba akaita kuti anyadziswe zvakanyanya uye abviswe. Nechikonzero ichi, mabhuku akave utiziro hwake uye hwindo rake rekuziva nyika. Pakupedzisira, zvinyorwa zvake zvakave nzira yekuratidza nekupemberera kuvapo kwake pasirese.
Mutambi wenhau weSpanish neoclassicism
Mudetembi akasarudzika uye munyori wekufamba, Fernández de Moratín akawana nzira yake yaanofarira yekutaura mumadhirama. Munyori akasarudza komedi, subgenre ine njodzi yenguva iyoyo. Uye hongu, isu tinotaura nezve nguva dzepedyo maererano nekuguma kwe ChiSpanish Goridhe Age. Pamusoro pezvo, mwaka wekare wainge wazadza danho ne (kunyanya) zvidimbu zvinoshamisa.
Kuseka sechinhu chinoratidza
Nekuda kwekutanga kwake uye kutsunga, mutambi wenhabvu weMadrid akapinda munhoroondo semunyori wezvimiriri zvakamiririra kubva kunopera kwemaXNUMX uye kutanga kwezana ramakore rechiXNUMX. Nenzira imwecheteyo, akashinga kudzidzisa nezvekukosha kwekuita kuti veruzhinji vafunge kuburikidza nekuseka.
Kune rimwe divi, Fernández de Moratín airatidza fungidziro yezviito zvakapusa uye zvezuva nezuva. Nekuti - mumaonero avo - pamusoro pekunakidzwa nekunakidzwa, vanosiya zvidzidzo zvekuongorora nekudzidza. Kufanana nevazhinji vanyori vemitambo yenguva dzakatangira, iye akanzwisisa yemitambo sechiratidziro chine basa rekudzidzisa uye rehunhu.
Mutambi wemitambo akanyatsoshandisa iyo neuralgic theatre postulates yeiyo Enlightenment: nyore uye kubatana, pamusoro pezvose. Iko kufagesisi uye kupfuura kwemaawa "chaiwo" kwakafanana, mukati menguva yakatarwa. Naizvozvo, ellipsis kana zvikamu zvinoitika panguva yekuchinja kwechiitiko.
Ndokunge, zviito zvese zvinoitika mune imwechete nzvimbo. Nhaurirano nezviito zvinopindirana nezvikamu uye nemhedzisiro. Ikoko, mavara ayo anopindura (kana kutsvaga kupindura) kune dhizaini yekufunga. Naizvozvo, chero nzira yekutenda mashura (yakafanana nekusaziva kwemunyori) kana zvekunamata zvachose inodzingwa.
Ehe vasikana, basa rinopokana pamberi penguva yayo
Unogona kutenga bhuku pano: Ehe vasikana
Ese maficha echimiro akatsanangurwa mundima mbiri dzapfuura anoonekwa mu Ehe vasikana. In consecuense, chikamu chematunhu anochengetedza enharaunda yeMadrid chakaratidza kusagadzikana nepfungwa dzakataurwa nevanhu chechidimbu ichi. Kunyangwe, payakaburitswa pakanga pasina mambo muSpain kana nguva yekuongorora basa raifadza ruzhinji.
Muna 1815 mauto aNapoleon akapinda akakundwa uye Ferdinand VII akawanazve chigaro chake. Ipapo, iyo bvunzurudzo yakanangidzira maziso ayo pane zvakanyorwa naFernández de Moratín. Mhedzisiro: kurambidzwa yezvikamu zvayo zvinomiririra. Ehe vasikana y Vakangwara. Vaviri, kunyangwe vasina kupokana pachena dzidziso dzeKaturike, vakapokana nesimba remhuri pamusoro pevechidiki.
Kunyanya, Ehe vasikana taura zvinopesana netsika yekuroora vakadzi vadiki kuvarume vakuru, kupindirana kwezvehupfumi. Dambudziko iri rinoshoropodzwa pakati pemitsara uye rinoshoropodzwa nekuda kwenhamba yemibatanidzwa isina mufaro uye michato isina kusimba. Zvakare nekushaikwa kwevana nekuti ivo vanhurume vasina kugona kwemuviri kubereka.
Rudo rwechokwadi, maererano nenzira yekufunga yemhuri dzechinyakare dzinoratidzwa muchirongwa, hachisi chinhu chinopfuura upenzi. Mune mamwe mazwi, zvisina basa uye zvisingaite fungidziro yehucheche mune chaiye nyika. Nezve zvimwe inri - zvechechi chikamu-, Fernández de Moratín anonongedzera kuvafundisi semubatsiri mutsika mukusiyana uku.
Don Diego mupfumi ane makore makumi mashanu nemapfumbamwe murume anodanana naDoña Francisca, mhandara yematsime gumi nemanomwe chete.. Pakati pekuputika kukuru, anokumbira amai vemukadzi mudiki, Doña Irene, kuti vamutendere kuroora mwanasikana wake. Ichi chirevo chinoratidzika kunge chakamunakira iye baba, chirikadzi ine michato mitatu mukubata uye makumi maviri nenomwe akabvisa nhumbu.
Sezviri pachena, panguva iyoyo michato yakadaro yaireva kuvimbisa ramangwana remhuri yese. Asi Doña Francisca ari kudanana nemumwe murume: Don Carlos (mwana wemukoma wemukomana wake). Nekudaro, kana iye kana mudiwa wake haashinga kupokana nezvido zvevakuru. Naizvozvo, vanozvisiya kuti vafambe nehupenyu hwavo hwakagadzirirwa kusafara uye kutambura.
Ehe vasikana: kukunda kwerudo uye kufunga
Mutsara naLeandro Fernández de Moratín.
Yakanyorwa muprozi uye nhaurirano pfupi uye chaiyo - kunze kwekumwe kuratidzwa kwakareba kunodiwa— basa rinosiya tsika yakajeka. Inoratidza: Kana chikonzero chakakunda pane kuda, mufaro unovimbiswa kune wese munhu anobatanidzwa. Kunyangwe munzira dzisingafungidzirwe.
Kubva pane ichi chirevo, mhedzisiro mhedzisiro inobvumira kukunda kwerudo mune yakanakisa manyorero engano "… Uye vakagara vachifara kubvira". Kunyangwe Fernández de Moratín achitaura kuti kuitira kuti uwane izvi "zvakakura" zvisarudzo, zvakakosha kufunga nepfungwa kwete nemoyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Theater » Ehe vasikana
Zvinonzwika sezvakanaka kwazvo, uye hunhu hwavanochera kumagumo hunongova hwehuMwari. Kunyora nezvenyaya idzi mukati mezana ramakore kwaireva chiito cheushingi husingaenzaniswi, munyori akamhanyisa njodzi yakanyanya yekuongororwa, uye huwandu hwekuuraiwa kana kushungurudzwa. Yakanaka chinyorwa.